डाक्टर साथी_नेपाल मेडिकल भोलिन्टियर सोसाइटी : 54. एपेन्डिसाईटिस ( Appendicitis)
मैना अधिकारी १२ कक्षामा अध्ययनरत् छात्रा हुन् । दिउँसो कक्षाकोठामा एक्कासी उनको नाइटोवरिपरि असाध्य दुख्न थाल्यो । केही समयपश्चात् त्यो दुखाइ दाहिने कम्मर तर्फ सर्न थाल्यो । साथीहरुले उनलाई हेर्दा हेर्दै गर्दा एक्कासी उल्टी गर्न थालिन् । उनलाई छाम्दा उनको शरीर पनि तात्तिएको थियो । उनलाई बिहानैदेखि खानाको रुचि पनि थिएन । साथीहरुले उनलाई तत्कालै नजिकको अस्पतालमा लगे । चिकित्सकले उनलाई एपेन्डिसाइटिस भएको घोषणा गरे ।
एपेन्डिसाइटिस एउटा आकस्मिक अवस्था हो । यसमा एपेन्डिक्स भन्ने अङ्ग सुन्निएको अवस्थामा हुन्छ । कहिलेकाहीँ त फुटिसकेको पनि हुन सक्छ । एपेन्डिक्स मानव शरीरमा पेटभित्र दाहिने कम्मरको अलि माथि सानो आन्द्रा र ठूलो आन्द्रा जोडिएको भागको पछाडिपट्टि रहेको अङ्ग हो । यसको उपचार हुन नसके एपेन्डिक्स फुटेर पेरीटोनाइटिस भएर मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । सन् १८८६ मा रेगीनाल्डले पहिलोपल्ट एपेन्डिसाइटिसका बारेमा तथ्य बाहिर ल्याएको पाइन्छ ।
एपेन्डिक्स एउटा पाइपजस्तो अङ्ग हो । यसको ल्युमेन बिस्तारै विभिन्न कारणहरुबाट बन्द हुन थाल्छ र यो सुनिन्छ । सुन्निएपछि यसले एपेन्डिक्सको भित्तामा चाप दिन्छ । जुन चापका कारण भित्तामा रहेका रगतका नसाहरु बन्द हुँदै जान्छन् र पीप जम्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा पनि एपेन्डिक्सलाई अपरेशन गरी ननिकालिएमा यो फुट्न जान्छ, जसको कारण संक्रमण रगतको माध्यमबाट सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर मानिसको मृत्यु हुन्छ। एपेन्डिसाइटिस पश्चिमी मुलुकमा बढी देखिएको छ । यसको कारण पश्चिमा देशहरुमा मासुको बढी प्रयोग हुन सक्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । वंशाणुगत रुपमा पनि एपेन्डिसाइटिस हुने सम्भावना बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
१. दुखाइः नाइटोवरिपरिबाट शुरु भएको दुखाइ बिस्तारै दाहिने कम्मरको माथि सर्न थाल्छ । २. उल्टी हुनुः एक वा दुईपटक उल्टी हुन सक्छ । ३. साधारणतया १०० डिग्री फरेनहाइटसम्मको साधारण ज्वरो देखिन्छ । ४. कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत देखिन पनि सक्छ । ५. कब्जियत, झाडापखाला अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले विभिन्न चिकित्सकीय परीक्षण गरेर एपेन्डिसाइटिस भए–नभएको पत्ता लगाउनुहुन्छ ।अल्ट्रासाउन्ड, एक्स–रे, सिटी स्क्यान रोग पत्ता लगाउन सहयोगी हुन्छन् ।विभिन्न किसिमका स्कोरिङ प्रणाली प्रयोग गरी रोगको अवस्था पत्ता लगाइन्छ । यसले एलभाराडो ज्यान्सकी आदि ।
यदि बिरामी २४–४८ घण्टाभित्र आएमा शल्यक्रिया गरी एपेन्डिक्सलाई निकाल्ने काम गरिन्छ तर ४८ घण्टापछि आएमा साधारणतया शल्यक्रिया गरिँदैन । यस्तो अवस्थामा बिरामीको उपचार अर्कै विधिबाट गरिन्छ भने ६–८ हप्तापछि बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने गरिन्छ ।
समयमै उपचार हुन नसक्दा एपेन्डिक्स फुटेर संक्रमणको कारण मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्दछ । शल्यक्रियापश्चात् कसै–कसैमा दिसाजन्य पदार्थ आइरहन्छ । यसलाई फिकल फस्टुल भनिन्छ । यसको उपचार गाह्रो हुन्छ ।
पेट दुखाइलाई सधैं साधारण पेट दुखाइमात्र सम्झनुभएन । यो एपन्डिसाइटिस पनि हुन सक्दछ । ‘ए, पेट त दुखेको हो नि’ भनेर औषधि पसलबाट दुखाइ कम गर्ने औषधिले दुखाइ तत्कालै त कम गर्ला तथापि एपेन्डिक्स फुटेमा मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ । त्यसर्थ, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।